Izintshisekelo mayelana nama-Oscars ongase ungazi | Izindaba zamagajethi
Nakulo leli sonto iHollywood Academy iwabeke obala amagama abantu abaphakanyiselwe i- oscar, impela yimiklomelo ehlonishwa kakhulu emhlabeni we-cinema. Ngunyaka owodwa futhi sizokwazi ukujabulela umcimbi omkhulu wemiklomelo ngoFebhuwari 28, lapho sizokwazi khona ukubona abalingisi ababaluleke kakhulu esikrinini esikhulu.
Ozelwe kabusha y Mad Max: Fury Road ngokuqokwa okuyishumi nambili neshumi ngokulandelana, bethulwa njengamafilimu amabili ayizintandokazi ukuze babe ngabanqobi abakhulu. Ngenkathi ulinde ukufika kwezinsuku zokulethwa kwama-statuette, besifuna ukuqoqa kule ndatshana Izintshisekelo eziyi-10 ngale miklomelo ongahle ungayazi.
Uma uyi-cinephile kusuka ekhanda kuye ozwaneni, iningi lalezi zilangazelelo ozovele uzazi, kepha uma njengathi ungumlandeli olula wama-movie, iningi lawo lizokumangaza kakhulu. Ulungele ukwazi ezinye izifiso mayelana nama-Oscars?
1 Umcimbi wokuqala kuthelevishini wenziwa ngo-1953
2 I-Oscar ngayinye ibiza idola elilodwa (amasenti angama-1 euro)
3 UWalt Disney, indoda u-Oscar
4 Iyini ifilimu enesibalo esiphezulu semiklomelo?
5 I-Italy, inkosi yamakhosi
6 UJack Nicholson, umlingisi oklonyeliswe kakhulu
7 U-Oscar wokuqala ukuwina i-Oscar kwenzeka ngo-1942
8 UKatharine Hepburn, umlingisi othandwa kakhulu
9 Bangu-4 kuphela abesifazane abaphakanyiswe emkhakheni we-best direction
10 Babili kuphela abalingisi abanqobe i-Oscar ngemuva kokufa
Umcimbi wokuqala kuthelevishini wenziwa ngo-1953
Namuhla umcimbi wama-Oscars owenziwa minyaka yonke ungumbukiso ezinhlelweni zenethiwekhi eziningi zethelevishini emhlabeni. Kodwa-ke, lokhu akukenzeki isikhathi eside futhi yilokho umcimbi wokuqala owenziwa kuthelevishini wenziwa ngoMashi 19, 1953. Obephethe ukuphindisela umcimbi okokuqala ngqa bekuyinethiwekhi yaseMelika i-NBC.
I-protagonist enkulu yaleyo gala kwakuyifilimu Umbukiso omkhulu kunayo yonke emhlabeni, eqondiswe nguCecil B. DeMille, othathe indondo yezithombe ehamba phambili.
I-Oscar ngayinye ibiza idola elilodwa (amasenti angama-1 euro)
Wonke umuntu uvame ukukholelwa ukuthi i-Oscar ingaba nenani lemali elingenakulinganiswa, kepha lokhu kwehluke kakhulu kweqiniso futhi lokho i-statuette ngayinye inenani le-1 dollar noma yini amasenti afanayo angama-87 kwe-euro. Isizathu sakho konke lokhu ukuthi kusukela ngo-1950, labo abawine imiklomelo kufanele basayine inkontileka ne-Academy ebavimbela ekuthengiseni lo mklomelo ngaphandle kokuyinikela kuqala eHollywood Academy ngentengo engu- $ 1.
Le nkontileka isayinwa yibo bonke abawinile ngemuva kuka-1950, ngakho-ke wonke ama-statuette angaphambi kwalolo suku angathengwa ngaphandle kwenkinga nangemali umnikazi wayo ayifunayo. Ngokwesibonelo Ngo-1999, uMichael Jackson wakhokha u- $ 1,5 million ukuthenga i-Oscar ngesithombe esihle kakhulu lokho kunqobile Ahambe Nomoya e 1940.
UWalt Disney, indoda u-Oscar
UWalt Disney ungumuntu onesibalo esiphezulu sama-Oscars emlandweni. Kwirekhodi lakhe eliqhakazile, uqoqa ingqikithi yama-statuette angama-22 futhi angabi ngaphezu kokuphakanyiswa kwamagama angama-59, okuyirekhodi elingasoze lakwazi ukulingana nomuntu eminyakeni eminingi ezayo.
Ngalezi zimpumelelo, iDisney iphinde yathola imiklomelo emine yokuhlonishwa, efanelekile uma sibheka iqhaza eyenzile emhlabeni wezamabhayisikobho.
Iyini ifilimu enesibalo esiphezulu semiklomelo?
Uma uWalt Disney kunguyena onenani eliphezulu kakhulu lemiklomelo, amafilimu anenani eliphakeme lama-Oscars abe Ben kaHure, Titanic y INkosi yamaRingi: Ukubuya kweNkosi ngama-statuette ayi-11 esewonke.
Ngemuva kwale trio yamafilimu asezinganekwaneni kukhona uhambe Nomoya y West Side Story ngemiklomelo eyi-10 lilinye
Leli rekhodi lingaphulwa kulo nyaka futhi njengoba sesishilo Ozelwe kabusha Inokuphakanyiswa okuyishumi nambili, yize iqiniso libukeka lilukhuni impela ukuthola umklomelo ogcwele.
I-Italy, inkosi yamakhosi
Uma sishiya abalingisi base-United States nabaseMelika, okuyibo impela abawine izithombe eziqoshwe kakhulu emlandweni, I-Italy yizwe eselinqobe izikhathi eziningi esigabeni sefilimu engakhulumi isiNgisi, nemiklomelo eyi-13 isiyonke. Zilandelwa yiFrance, iSpain neJapan ngemuva kancane futhi zinezithombe ezimbalwa ezigangeni zazo. Mhlawumbe lo nyaka yithuba elihle lokuthi elinye lala mazwe livale igebe.
UJack Nicholson, umlingisi oklonyeliswe kakhulu
Isihloko saleli lukuluku alilona iqiniso ngokuphelele futhi yilokho Jack Nicholson Ungomunye wabalingisi abathathu ozuze imiklomelo eminingi, enengqikithi yabathathu, kodwa wabelana ngaleli lungelo noDaniel Day Lewis noWalter Brennan nabo abanezithombe eziqoshiwe ezi-3 endaweni enelungelo ekhaya lakhe.
U-Oscar wokuqala ukuwina i-Oscar kwenzeka ngo-1942
Kuyilukuluku nje elithakazelisayo kepha ukuzithola siku-Oscar wokuqala owathola i-Oscar kufanele siye kuze kube ngo-1942. Ngalowo nyaka U-Oscar Hammerstein II waba ngumuntu wokuqala ogama lakhe lingu-Oscar ukunikezwa lo mklomelo. Njengokungathi lokho bekunganele, ngemuva kweminyaka emine waphinda lo mklomelo.
Kusukela ngalolo suku, abantu abaningi ababizwa ngama-Oscars banikezwe i-Oscar, ngezigaba ezahlukene.
UKatharine Hepburn, umlingisi othandwa kakhulu
Ngaphandle kokuthi uMeryl Streep uqokwe amahlandla ayi-18 esewonke, akalona irekhodi lokuba ngumlingisi oklonyeliswe kakhulu, okuwela kulo Katharine Hepburn, esizuze ingqikithi yemiklomelo emi-4 kuwo wonke umlando.
Bangu-4 kuphela abesifazane abaphakanyiswe emkhakheni we-best direction
Kuwo wonke umlando bangu-4 kuphela abesifazane abakhethwe emkhakheni we-best direction. Munye kuphela kubo, uKathyn Bigelow owaziwa ngeZone of Fear noma i-Living on the Edge, okwazile ukuwina lo mklomelo.
Babili kuphela abalingisi abanqobe i-Oscar ngemuva kokufa
Kuwo wonke umlando wama-Oscars, amaningi, abatolika ababili kuphela abathole lo mklomelo ngemuva kokufa, Kumayelana UPeter Finch noHeath Ledger. Owokuqala washona eneminyaka engama-60 ngenxa yesifo senhliziyo kwathi owesibili wabulawa ukweqisa izidakamizwa eneminyaka engu-28. Bobabili bashiye lo mhlaba, ngeshwa, bengazi ukuthi bathole ukuqashelwa okuphezulu kakhulu okutholwa ngumlingisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Izintshisekelo eziyi-10 mayelana nama-Oscars ongazi